Indawo yokuhlala enokuthula emvelweni-KUZGUN ODA - I-Airbnb
Indawo yokuhlala enokuthula emvelweni-KUZGUN ODA
Başiskele, Kocaeli, i-Turkey
Ikamelo e-i-guesthouse ibungazwe ngu-Gülsevin
Ungathanda ukuvuka uzwa imisindo yezinyoni? Uzungezwe ukubukwa okumangalisayo kwamahlathi aluhlaza? Thatha uhambo lwangasese ngemva kwesidlo sasekuseni futhi ujabulele ikhofi lakho lantambama ngenkathi uthatha ubuhle bezintaba zase-Samanlı? Uma ufuna isilungiselelo esizolile ongasichitha ngempelasonto, ungabheki kude kunezindawo zethu ze-boutique!
Indawo yethu ethule futhi ethokomele inamagumbi amabili esitayela saseScandinavia. Amakamelo aphansi, anikeza ukufinyelela okulula engadini. Ngayinye inekhishi negumbi lokugezela langasese, futhi ifakwe izinto zesimanjemanje. Cishe zingamamitha-skwele angama-30 futhi zingalingana abantu abane (nemibhede emibili eyodwa kanye nombhede owodwa). Izingane ezineminyaka engu-2-6 zihlala mahhala.
Sinemizila embalwa emangalisayo yangasese yokuhamba ngezinyawo neyokuhamba ngebhayisikili esizeni (kuwo wonke amaleveli olwazi). Ukuhamba kwakho kuzokuyisa emikhakheni yethu yamakhambi anempilo namnandi, afaka ama-blueberries nama-lavender. Kukhona ezinye izindlela eziseduze, futhi indawo yethu yokuhlehla iseduze ne-Beşkayalar National Park, i-Menevşe Plateau, i-İnönü Plateau, i-Aytepesi, ne-Serindere Canyon kanye nezimangaliso zakhona zemvelo. Siphinde sibe nodonga olukhuphukayo esizeni lwabafunayo!
Olimbera Club itholakala Kocaeli, Servetiye Camii Village, Kirazpınarı. Indawo yokuhlehla iyibanga elingamakhilomitha angama-25 ukusuka edolobheni eliseduze. Ukushayela kwakho lapha kuzokuyisa ezindaweni zokudlela ezithokomele nezitolo zenyama nezinhlanzi futhi kukunikeza ukubukwa okuhle kwezintaba eziseduze.
Siyajabula ukusebenzisana nawe ukuze sakhe indawo yokuhlala elungiselelwe ukuhlangabezana nezidingo zakho